မင်းကွန်းဘဲလ် | မြန်မာသွားရောက်ကြည့်ရှု
← Hsinbyume စေတီတော်
Atumashi ကျောင်းတိုက် →
အဆိုပါ မင်းကွန်းဘဲလ် ကြီးမားသောမင်းကွန်း Pathodawgyi ကနေလမ်းပေါ်တက်မြောက် 100 နှင့်ပတ်သက်ပြီးတည်ရှိသည်. သင်ကလမ်းတစ်လျှောက်ကသင်၏လက်ဝဲဘက်နှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောနည်းနည်းစေတီတော်ပေါ်အများအပြားအသေးစားစားသောက်ဆိုင်နှင့် souvenier စျေးဆိုင်လွန်သွားပါလိမ့်မယ်. သငျသညျမိနစ်အနည်းငယ်ရှိပါကကြောင့်အတွင်းပိုင်း pop နှင့်တစ်ဦးကြည့်, ဒါဟာကွဲပြားခြားနားသည်.
အဆိုပါမင်းကွန်းဘဲလ်ချခဲ့သည် 1808 အဆိုပါမင်းကွန်း Pathodawgyi ဗိမာနျတျော၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်. ၎င်း၏နှစ်ခုအဓိကအထောက်အကူဆိုးဆိုးရွားရွားထဲမှာပျက်စီးခဲ့သည် 1839 မြေငလျင်ဒါပေမယ့်ကံကောင်းတာဟာခေါင်းလောင်းသူ့ဟာသူနဂိုအတိုင်းအသက်ရှင်ကျန်ရစ်. အကြမ်းအားဖြင့်လာမယ့်အဘို့ 60 ဒါကြောင့်ကိုယ့်သည်အထိမြေပြင်ပေါ်မှာထိုင်နှစ်ပေါင်း 1896 ဒါကြောင့်အသစ်ကအထောက်အကူပေါ်သို့ချီလျက်ရှိနေဆဲယနေ့ပျော်ရွှင်စွာဆွဲထားတဲ့သောအခါ, ယခု၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အသေးစားဗိမာန်တော်၌ snug. အဆိုပါခေါင်းလောင်းအခြိနျများ၏ကျွမ်းကျင်မြန်မာလက်သမားတစ်ဦးအကြီးအ testement ဖြစ်ပါသည်.
ဒါကြောင့်နှစ်တိုင်အောင်တက်လှဲချသောအခါ မှစ. 2000, မှာအလေးချိန် 90 တန်ချိန်နီးပါး5သန်းနဲ့တစ်ဦးရဲ့ width ရှိခြင်း, အဆိုပါ မင်းကွန်းဘဲလ် ကမ်ဘာပျေါတှငျအကြီးဆုံးအူခေါင်းလောင်းအဖြစ်စံချိန်ကျင်းပ.
အနောက်ပိုင်းခေါင်းလောင်းထိုးအများကြီးမတူဘဲ, အဆိုပါမင်းကွန်းဘဲလ်အတွင်း၌တစ်ဦး clanger ရှိသည်ပါဘူး. အဲဒါကိုပြင်အနားကွပ်အပေါ်တစ်ဦးအသေးဆောက်ပုတ်နှင့်အတူတစ် Gong တူသောလှုပ်ခတ်နေသည်မြည်စေရန်.
သငျသညျပြင်အနားကွပ်အောက်မှာချော်နှင့်ခေါင်းလောင်းအတွင်း၌ရပ်တည်နိုင်အောင်အဆိုပါခေါင်းလောင်းကြမ်းပြင်ကိုချွတ်အလုံအလောက်မြင့်မားသည်. အတွင်းပိုင်းအတိတ်ဧည့်သည်များအနေဖြင့်အများကြီးမဲ့ grafitti နှင့်ဖုံးလွှမ်းဖြစ်လာ, အဲဒါကိုထပ်ထည့်ကြဘူးကျေးဇူးပြုပြီး.
အဆိုပါမင်းကွန်းဘဲလ်ကနေချစ်စရာကောင်းတဲ့ကြီးမားသောအဖြူရောင် Hsinbyume စေတီတော်ရောက်ရှိဖို့အဓိကလမ်းဖွင့်မယ့်နောက်ထပ် 150m ဆက်လက်.